प्रदेश – Nayadhar
तानसेन। लुम्बिनी प्रदेश सरकारका उर्जा, जलस्रोत तथा सिचाई मन्त्री बीर बहादुर रानाले हरेक नागरिकलाई आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यमा प्रदेश सरकार लागि परेको बताएका छन् । मन्त्री रानाले नागरिकको जीवनस्तरसंग जोडिएका हरेक व्यवसाय गर्दा हुन सक्ने जाखिम न्यूनिकरण लागि पनि कानून निर्माण गरेर कार्यान्वय गर्नुपर्ने बताए । पाल्पाको तानसेनमा धातुबाट मूर्ती बनाउने श्रमिकहरुका लागि व्यवसाय सुरक्षा र स्वास्थ्य सम्बन्धि समेतनामूलक तालिमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री रानाले दीर्घकालिका रुपमा नागरिकल...
तानसेन। आज बिहान साढे १० बजेतिर स्याङ्जाको वालिङगमा भएको जीप दुर्घटना हुँदा पाँच जनाको मृत्यु भएको छ । डाँडाखर्क गाउँबाट वालिङतर्फ आँउदै गरेको ग १ ज ७३९९ नम्बरको जीप डाँडाखर्कस्थित भित्री सडक खण्डमा दुर्घटना हुँदा एक बालकसहित पाँच जनाको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ । मृत्यु हुनेमा वालिङ नगरपालिका वडा नं.१२ डाँडाखर्कका ६५ वर्षीय वीरबहादुर दाला मगर, सोही स्थानका ४५ वर्षीया हीरा दाला मगर, २५ वर्षीया शर्मिला सारु र ६१ वर्षीया कुलकुमारी कनौजेको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार...
तानसेन। स्याङजा आज बिहान जीप दुर्घटना भएको छ । वालिङ नगरपालिका वडा नं. १२ को माथिल्लो डाँडाखर्कस्थित ग १ ज ७३९९ नम्बरको जीप दुर्घटना हुँदा चार जनाको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ । दुर्घटनामा दुई जना घाइते भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय स्याङ्जाले जनाएको छ । घाइतेहरुको वालिङ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ । जीप सडकदेखि अन्दाजी दुई सय मिटर तल खसेको थप विवरण आउने केही समय लाग्ने प्रहरीको भनाई छ ।
तानसेन। पाल्पामा बस दुर्घटना हुँदा ६ जना घाइते भएका छन् । घाइते सबैको अवस्था गम्भीर रहेको प्रहरीले जनाएको छ । शुक्रबार बेलुका ५ बजेतिर रैनादेवी छहरा गाउँपालिकाको वडा नं. ६ स्थित पानीडाँडादेखि जुठापाैवातर्फ जाँदै गरेको ग १ ख ४९०२ नं. को बस दुर्घटना हुँदा बस धनी ४२ वर्षीय बेदबहादुर जिसीसहित ५ जना बालक घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ। घाइते हुनेमा ७ वर्षीय रोहीत घर्ती, ८ वर्षीय मिलन बगाले, ८ वर्षीय रोम घर्ती, ९ खिमबहादुर घर्ती र १० वर्षीय आकाश रास्कोटी रहेको जिल्ला प्रहरी कार...
शुक्रबार, बैशाख ०२, २०७९
तराई-मधेशमा आज होली पर्व मनाईंदै
काठमाडाैं।हाेलीकाे दाेस्राे दिन तराई-मधेस क्षेत्रमा आज होली पर्व मनाईंदैछ । हिजो पहाडी जिल्लाहरुमा होली अर्थात फागु पर्व मनाइएकोमा अाज तराईमा मनाइएकाे हाे । सामुहिक रुपमा विभिन्न रङ खेली होली अर्थात फागु पर्व मनाउने चलन छ । होली पर्व आपसी सद्भाव, भातृत्व र आत्मीयताको प्रतिक मानिन्छ । होलीका अवसरमा विभिन्न सांगीतिक तथा साँस्कृतिक कार्यक्रमहरु गरेर समेत खुसी साटासाट गर्ने गरिन्छ । पहाड तथा हिमाली क्षेत्रमा मनाइने फागु पूर्णिमा आज तराईमा होलीको नामबाट मनाइँदै छ ।
शुक्रबार, चैत्र ०४, २०७८
दमौलीमा आगलागी, हेलिकप्टरबाट आगो निभाउने प्रयास जारी
काठमाडौं । तनहुको दमौलीमा भएको आगलागी हेलिकप्टरले निभाउन सुरु भएको छ । काठमाडौंबाट गएको सिम्रिक एयरको हेलिकप्टरले दमौली बजारमा लागेको आगो निभाएको हो । बजार नजिकको नदीबाट पानी ओसारेर हेलिकप्टरमार्फत् आगो निभाउन थालिएको हो । उक्त हेलिकप्टरमा क्याप्टेन इन कमाण्ड सुरेन्द्र पौडेल र क्याप्टेन राजेन्द्र दुवाल छन् । उनीहरुसँगै अग्नि नियन्त्रक टोली पनि रहेको सिम्रिक एयरका योगेश सापकोटाले जानकारी दिए । गृह मन्त्रालयले पत्र लेखेर सिम्रिक एयरको सहयोग मागेसंगै काठमाडौंबाट हेलिकप्...
सामाजिक विभेद विरुद्ध जनप्रिय माध्यमिक विद्यालयद्वारा उत्पादित सडकनाटक प्रदर्शन
पाल्पा । तानसेन नगरपालिका-६, बर्तुङ्गस्थित जनप्रिय माध्यमिक विद्यालयद्वारा आयोजित सामाजिक विभेद विरुद्धको सडकनाटक पश्चाताप तथा नृत्य कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । शान्तिको लागि कला (म्याप) काठमाडौँ तथा श्री जनप्रिय माविद्धारा उत्पादित सडकनाटकका माध्यमबाट सामाजिक विकृतिविसंगति विरुद्ध नागरिकहरुलाई सचेत गरिएको हो । तानसने नगरपालिका-६को बर्तुङ्गचौराहा, देवकोटाचोक र जैसीचौपारीमा सामाजिक विभेद विरुद्धको सडकनाटक प्रदर्शन गरिएको छ । नेपालको संविधानले नै छुवाछूत र जातीय विभेदलाई ...
बिहिबार, फाल्गुण १९, २०७८
पाल्पा अस्पताल विकास समितिमा पाण्डे, रामपुरमा ढकाल तथा आयुर्वेदमा रायमाझी नियुक्त
तानसेन। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पाल्पा र रामपुर अस्पताल तथा पाल्पास्थित आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रको समितिको अध्यक्षमा नियुक्त गरेको छ । आइतबार बसेको मन्त्री परिषद्को बैठकले लुम्बिनी प्रदेशमा खेलकुद परिषद् र अस्पताल व्यावस्थापन समितिमा जिम्मेवारी प्रदान गरेको हो । बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्री तिलकराम शर्माले विभिन्न पाल्पा अस्पताल विकास समितिको अध्यक्षमा नेत्रप्रसाद पाण्डे नियुक्त गरेको बताए । यस्तै पाल्पा आयुर्वेद...
सोमबार, फाल्गुण १६, २०७८
गोरखदल गणले निर्माण गरेको ‘सैनिक सङ्ग्राहलय’ हस्तान्तरण
तानसेन। नेपाली सेनाको पाल्पास्थित गोरखदल गणले बनाएको सैनिक सङ्ग्राहलय पाल्पा दरबार सङ्ग्राहलय हस्तान्तरण गरिएको छ । लुम्विनी प्रदेश सरकार, गोरखदल गण र नेपाली सेनाको सहयोगमा निर्मित ‘सैनिक सङ्ग्राहलय’ लुम्बिनी प्रदेश स्तरीय पाल्पा दरबार सङ्ग्राहलयलाई हस्तान्तरण गरिएको हो । सैनिक सङ्ग्राहलयको निर्माण कार्य सकिएसंगै सैनिक संग्रहालय पनि पाल्पा दरबार सङ्ग्राहलयले नै संचालन र व्यवस्थापन गर्ने गरी बिहीबार एक कार्यक्रमका बीच गोरख दल गणका गणपति जनककुमार बस्नेतले डिभिजन वन कार्या...
बिहिबार, माघ २७, २०७८
पाल्पा दरबार संग्रहालय विकास समिति गठन गर्ने प्रदेश सरकारको निर्णय
बुटवल। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेश स्तरीय पाल्पा दरबार संग्रहालय संचालनका लागि विकास समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सो निर्णय गरेको हो । कानून महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयको प्रस्तावमा पाल्पा दरबार संग्रहालय संचालनका लागि विकास समिति गठन आदेश, २०७८ स्वीकृति गर्ने निर्णय भएको हो । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमार्फत सो निर्णय सार्वजनिक गरिएको हो । ऐतिहासिक म...
मंगलबार, माघ २५, २०७८
अवरुद्ध तानसेन–बुटवल सडक एकतर्फी खुल्यो
दिउँसोदेखि अवरुद्ध तानसेन-बुटवल सडक खण्ड अझै खुलेन
तस्वीरमा हेर्नुहोस् तानसेन–बुटवल सडकमा खसेको पहिरो
कालीमाटीमा सुख्खा पहिरो खस्यो, तानसेन–बुटवल सडक अवरुद्ध